स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
कति जना "स्वनिर्मित" तपाईलाई थाहा छ? निस्सन्देह, सत्य के हो भने हामी मध्ये कसैले पनि आफैंलाई बनाउँदैनौं। हामी हाम्रो जीवन आमाको गर्भमा रहेको सानो बिन्दुको रूपमा शुरू गर्दछौं। हामी यति कमजोर जन्मेका छौं कि यदि हामी आफैंमा बाँकी रह्यौं भने हामी केही घण्टामै मर्नेछौं।
तर जब हामी वयस्क हुन्छौं, हामी सोच्छौं कि हामी स्वतन्त्र छौं र यो आफ्नै रूपमा गर्न सक्षम छौं। हामी स्वतन्त्रताको लागि आतुर छौं र हामी अक्सर सोच्छौं कि स्वतन्त्र हुनु भनेको कुनै पनि तरिकामा बाँच्नु र हामीलाई मनपर्ने कुरा गर्नु हो।
यस्तो देखिन्छ कि हामीलाई सहयोगको आवश्यक छ भन्ने सरल सत्यलाई स्वीकार गर्न हामी मानवहरूलाई गाह्रो छ। मेरो मनपर्ने शास्त्रपदहरू मध्ये एक हो: "उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो तर हामी आफैंलाई होइन आफ्ना जनहरूका निम्ति र भेडाहरूलाई आफ्नो चरामा।" (भजन .100,3..XNUMX) यो कत्तिको सत्य छ र हामी उहाँकै हौं भनेर स्वीकार्न हामीलाई गाह्रो छ - हामी "उहाँको खर्कका भेडाहरू" हौं।
कहिलेकाँही जीवनको ज्वरोहोर सes्कटहरू, जब यो लगभग ढिलो भयो, हामीलाई हामीलाई मद्दत चाहिन्छ भनेर स्वीकार्न उत्प्रेरित गर्दछ - परमेश्वरको सहयोग। हामीलाई लाग्छ कि हामीसँग के गर्ने र हामीलाई के मनपर्दछ भन्ने बारे सबै अधिकार छ, तर विरोधाभासपूर्ण रूपमा हामी यस बारे दुखी छौं। आफ्नै तरिकाले जानुहुन्छ र आफ्नै काम गर्नाले हामी सबैको लागि तिर्खाएको गहिरो पूर्ति र सन्तुष्टि हुँदैन। हामी भेडाहरू बरालिएर झैं छौं, तर शुभ समाचार यो हो कि हाम्रो जीवनमा गम्भीर गल्तीहरूको बाबजुद परमेश्वर हामीलाई माया गर्न कहिल्यै छोड्नुहुन्न।
रोमी 5,8: -10-१० मा, प्रेरित पावलले लेखेका थिए: "तर जब हामी पापी थियौं त हाम्रो निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो भन्ने तथ्यमा भगवान्‌ले हामीप्रति आफ्नो प्रेम देखाउनुहुन्छ। अब यदि उसले हामीलाई क्रोधबाट बचाउँछ भने अब हामी उसको रगतले धर्मी ठहरिएकाछौं किनकि यदि हामी अझै उसको शत्रुको साथमा थियौं भने उनको छोराको मृत्युले गर्दा परमेश्वरसँग मिलाप भयो भने हामी झन् कति बढ्ता हुन्छौं? हाम्रो जीवन उहाँबाट बचाइनेछ, अब हामीसँग मेलमिलाप भएको छ।
परमेश्वर हामीबाट कहिल्यै हार मान्नुहुन्न। ऊ हाम्रो मुटुको ढोकामा उभिन्छ र दस्तक दिन्छ। हामीले भर्खर ढोका खोल्न आवश्यक छ र उसलाई भित्र जान दिनुहोस्। भगवानबिना हाम्रो जीवन खाली र अपूर्ण छ। तर पिताले पुत्र र पवित्र आत्माद्वारा बाँचेको रमाइलो र पूर्ण जीवन - तर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको जीवन हामीसँग बाँड्नको लागि बनाउनुभएको हो। बुबाको प्यारो छोरा येशू ख्रीष्ट मार्फत हामी परमेश्वरको परिवारको पूर्ण सदस्य बन्छौं। येशू मार्फत, परमेश्वरले हामीलाई पहिले नै आफ्नो सम्पत्ती बनाइसक्नुभयो, र हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँ हामीलाई कहिल्यै जान दिनुहुन्न। त्यसोभए किन सुसमाचारमा विश्वास नगर्ने, विश्वासमा परमेश्वरतर्फ फर्कनुहोस्, क्रस लिनुहोस् र येशू ख्रीष्टको पछि लाग्नुहोस्? यो साँचो स्वतन्त्रताको एकमात्र मार्ग हो.